Ngaba kufanelekile ukuba ube nebhlog? -I-Geofumadas
Ngaba kufanelekile ukuba neblogi?
NgoJulayi, 2010 egeomates My
Kubonakala ngathi akukho xanduva ukuqinisekiswa okungalunganga ngaphandle komxholo kunye nenkcazo eyaneleyo yoko sikuqondayo ngokuba nebhlog okanye into esiyixabisayo.
Kumatyeli aliqela ndiye ndaphawula ukuba uGeofumadas wazalwa enombono wokwanelisa into yokubhala nokubhala ngexabiso lezoqoqosho ngokwenza oko. Ixesha libonisile ukuba ibhalansi yokujonga zombini iyasebenza, nangona ingeyiyo yonke into elula njengokuyishwankathela kwisithuba esifutshane.
Kwifoto unyana wam abonisa ibhombu xhuma ihafu yesibini ngaphambi kokuba iwele emanzini. Ndinamathele apha ukulinganisela ukungoneliseki kwakho post yangaphambili Ndinikezelwe ngokupheleleyo kubuchule bendodakazi yam.
Oko sikubiza ngokuba nebhlog
Ukuba nebhlog kuqondwa njengokulawula indawo ekubhalelwa kuyo rhoqo, kwisihloko esibhekiswe kwicandelo elithile, ukunxibelelana nabafundi kunye nokwazisa ukuba uyakuyonwabela ukwenza konke oku kungentla.
Ukuhamba rhoqo kokubhala okuhambelana, kunokuba yinto yokungena yansuku zonke, malunga ezimbini ngeveki okanye ngethamsanqa. Kuxhomekeka kwixesha onalo kunye nomxholo lowo ulithanda kakhulu itheko. Umxholo awafanele ukuba uvalwe kangangokuba akukho ndawo yokukhulula icala umntu, nangona intsingiselo kufuneka igcinwe kwicandelo elithile labantu ababelana ngezinto ezifanayo kwaye ekuhambeni kwexesha baziva ukuba izithuba zinexabiso kwicandelo.
Ke kufuneka kubekho into kuyo yonke le nto siyithandayo. Ukubhala akuyiyo wonke umntu, hayi ukuba ufuna ukuyenza rhoqo kubaphulaphuli inenombolo ye-IP kuphela, ekhawulezayo ukuba iGoogle iya kwenye indawo inenye elingundoqo phantsi kwengalo.
Kuya kufuneka unyamezele ukufumana kwaye uqonde icandelo elincinci elingahambi ngaphaya kwe-15% yokutyelelwa imihla ngemihla, okudala ukuthembeka kumbhali oneminwe engaziwayo. Ukungaziwa kungagcinwa kodwa ekuhambeni kwexesha icala loluntu kufuneka liboniswe nokuba asiyabelani na le migaqo. Umfundi kufuneka azazi izinto azithandayo, oobhazabhaza bazo, uloyiko lwazo, indlela ababona ngayo ubomi emva koko banokwenza imifanekiso yeendawo abahlala kuzo mihla le, umsebenzi, imeko yentsapho, iindawo zokuhamba.
Ngapha koko kufuna ukufudumala komntu ukuzama ukugcina ubudlelwane necandelo elincinci elingaphantsi kwe-3% yokuba izimvo, zithumele i-imeyile kumhleli, Bhalela kwakhona, bhuqa okanye wabelane ngesihloko osifumene sinomdla kwinethiwekhi yoluntu. I-7% eseleyo ihlala ithembekile ekungazibonini, ngaphandle kokufuna ukwazi, ukuhlonipha, ukuncoma kunye neemvakalelo zokuthiya nokuzicaphukela.
Emva kweminyaka emithathu ungafunda ukuba le nto besifuna ukuyazi ibingonelanga, kodwa ukuba isebenza njengembewu ukuqonda ezinye izinto. Ngapha koko, ibiyinzuzo yokufunda ngakumbi kunaleyo siyikhuphile njengeyethu.
Esikubiza ngokuba "kufanelekile"
Oku akunyanzelekanga ukuba kwenziwe malunga nemali, ukwaneliseka kuku kwinqanaba lokubuya ngokunxulumene notyalo-mali. Ukuba inzondelelo ityaliwe, kuya kufuneka kubuyelwe inkanuko enkulu, kucacile ukuba ayisiyiyo eyona nto kugxilwe kuyo njengebhlog ezifana Chocolate, apho uAngy ngokuqinisekileyo eqonda inzuzo engasemva kweenkcazo ezininzi zeemvakalelo zabafundi bakhe ukuba ngaphezulu kokuba yimixholo yomxholo bangabahlobo nokuba bakwelinye icala lelizwekazi, abangangomsebenzi wabo wejomatic kodwa bonwabelayo lonke idrophu yokuphefumlelwa. apho icinezelwe iqhosha ngalinye.
Kufuneka kwakhona siqonde ukuba ixesha elichithwe kwiblogi lixabise imali, esinokuthi silisebenzise kumsebenzi wokuvelisa, indawo nosapho, ukuphumla, ukuhamba, ukuthengisa iinkonzo, imfundo, njl. Yonke le nto ineendleko zotyalo mali kwaye ke kufuneka ifumene imbuyekezo ephinda iphinde iphinde ihlambe ixesha lokuhamba.
Ukuveliswa kwabanye kuye kwabazuzisa ababhali bebhlog, apho kukho abadumileyo, inethiwekhi ezikhusela amalungelo abo. Yintoni eyake yindleko yalula kunye neenkampani ezenze intengiso kunye nokuthengisa amakhonkco kwishishini elinomdla ekugqibeleni elisebenza. Ukusuka koku ndingashwankathela ezinye endizisebenzise kwiGeofumadas:
Iintengiso zikaGoogle, ziyacaphukisa ezinye, zingabalulekanga kwabanye, kodwa yindlela yangaphambili yokwenza isithuthi ukuba sibe yinzuzo ngokuchofoza.
Izithuba ezixhaswayo, ezinye zivela eZync, ezinye zivela kuVavanyo. Akukho zininzi, kodwa kwakhona ukuba zilungele ukungena kwindawo, zihlawula amatyala kwaye emva kokuwa kunyaka ophelileyo ziye zabuya kwakhona kancinci.
Iintengiso eziceliweyo, ezi zezo inkampani okanye ezinye ii-blogger ezizicelayo ngqo, nokuba zikho blogroll okanye ngaphakathi kweposi. Le rhafu ngaphezulu -ngakumbi-Kodwa ukuya kuyo kuthatha ukhathalelo lokuba umxhasi uziva ngathi kuyinto efanelekileyo.
Izicelo zempembelelo, ezi azizozentengiso ezixhaswayo kodwa iimfuno ukubona ukuba ziindaba ezinomdla, isihloko, imveliso, ishishini kwaye sithathe ithuba ngesixa sempembelelo esinokubakho, yenza I-tweet, ukujijisana, okumnandi, ubuso ...
Ngawaphi amagama angaqhelekanga esiza kuziqokelela. Ngethamsanqa, iCervantes ihambile.
Le mizekelo ingentla zezinye iindlela -ayisiyiyo yodwa-Iwebhusayithi yenze ukuba kube lula ukuba iibhodi ze-Intanethi zikhangele into ezavuza ukuthanda kwabo ukubhala. Kodwa ukubhala kwi-Intanethi kuphela akunenzuzo kwimidiya yethu ye-Hispanic, hayi kuthi thina bangabhali be-amateur, abazinikezele kwezinye izinto emini kwaye babhale ebusuku.
Kuyimfuneko ukuba nento onayo, oku kunokuba nempembelelo, ulwazi, unxibelelwano, iimveliso okanye iinkonzo.
Ixesha elingaphezulu, ukubonelelwa kweenkonzo ezizodwa kuza nge-inertia kwaye kufuneka uyilungiselele. Kwimeko yebhlog yefoto kuyakuba nemfuno yeefoto, kwimeko yeemveliso zetekhnoloji kuya kubakho imfuneko yokuthengiswa kwezi zinto, imeko yebhulogi yobuchwephesha bejogali kungaphuhliswa kweenkqubo okanye uncedo lwexesha elifanelekileyo iprojekthi
Ngokukhethekileyo, kuya kufuneka ulungele ukubonelela ngeenkonzo okanye ukubonelela ngemveliso ezingadingi ubukho bomzimba. I-Intanethi inceda kakhulu koku kwaye kufuneka uthathe ithuba. Izimemo kwimisitho akufuneki zichithe, ukuba zingafundi okuninzi kodwa ukutyala imali kubudlelwane bobuchwephesha obuya kuthwala isiqhamo ekuhambeni kwexesha.
Ke, emva kweminyaka embalwa yokubhala ngokucwangcisiweyo, ukubonisana okhethekileyo kuya kufika kwaye kuqeshe ngaphezulu -kakhulu-. Kwaye lixesha lokwenza ezi zinto a umzuzu wokubhabha ungayikhathaleli ngokupheleleyo ibhlogi okanye ubuncinci wazise.
Kuthekani ukuba kufanelekile ukubhloga?
Ukuba sithetha ngokubhala ngoqeqesho kunye nolwaneliseko oluyinzuzo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iingxaki eziphambili ze-Acer Aspire One
Post Next I-Microstation Geographics: Incwadi yenkcazeloOkulandelayo "
I-5 iphendula "Ngaba kufanelekile ukuba ube nebhlog?"
Ukuxela iakhawunti zakho, akufanelekanga!
Ewe kunjalo, ukuba kufanelekile ukuba ube nebhlog kwaye ngaphezulu kwabo bafuna ukubhengeza ngokucacileyo kwihlabathi kwaye bathethe ukuba baziva njani kwaye yintoni abayikholelwayo kwaye yeyiphi indlela ebhetele kunale efumaneka kwi-Intanethi, nangaphezulu ngakumbi ukuba babelane ngengqondo, ubuchwephesha kunye nobuchwephesha. Kungcono ukuba oku kuhambelana kunye nembuyekezo yoqoqosho ngexesha.
Ngokuqinisekileyo kufanelekile! Unyanisile kwaye ukuba kukho into "eye yanditsala" kule ndawo, ukongeza kwimfundo, likwicala lomntu, kuba uhlala uhlangula izinto zemihla ngemihla ezisikhumbuza ukuba ungumntu oqhelekileyo, ubeka amandla kunye nomnqweno kwaye akukho nto yasimahla, ukuba ufumane into kufuneka isebenze!
Kum, ngaphandle kwamathandabuzo, kufanelekile oko, kuba njengoko usitsho uthando oluzayo kum (kwaye le veki iye ngequbuliso yeza kum ivela kumfundi othandekayo othandekayo) evela kwiindawo ezininzi ayinaxabiso kwaye ihlala indinika inkuthazo engakumbi ...
Enkosi ngokundikhumbula ngelinye ixesha kwakhona
Ngaba kufanelekile ukufunda ibhlog?